Ilaalinta Saamaynta Kalluumeysiga, kiiska ugu firfircoon | Wararka IPhone
Dadaallada Apple ee ah inay ka dhigto iphone-keeda mid adkaysi badan ayaa had iyo jeer la qiimeeyaa, oo leh iPhone 11 waa hufnaanta astaantan ee ay doonayeen inay ku muujiyaan mid ka mid ah ololahooda ugu weyn ee xayeysiinta. Laakiin terminal aad qaali u ah oo gebi ahaanba galaas laga sameeyay way adag tahay in lagu dhiirado in la xidho "qaawan." Maanta waan ku tusaynaa nooc ka mid ah Kalluumeysiga, mid ka mid ah kiisaska ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo iPhone-keena, gaar ahaan haddii aynaan rabin in la kordhiyo dhumucda xad-dhaafka ah.
1 Naqshadaynta soo-dhexgalka oo hooseysa
2 810G ilaalin militari
Naqshadaynta soo-dhexgalka oo hooseysa
Waxaan u isticmaalnay kiisaska ilaalinta ee leh naqshad qarisa dhammaan inta badan casriga. Qaarkood waxay ku gaadhaan dhadhan fiican, oo leh "dagaal" naqshado warshadeed oo inbadan oo naga mid ahi jecelyihiin, laakiin xaaladaha badankood dabool ma aha maalin kasta. Galiye wuxuu rabay inuu qaado waddo gebi ahaanba ka soo horjeedda, oo leh nashqad yar oo qarinaysa iPhone-keena. Aniga ahaan waxay i xasuusisaa wax badan oo ka mid ah "Bumpers" -ka Apple caan ku ahaa dhawr sano ka hor (oo taas oo si la yaab leh aynaan uga maqal).
Kiisku wuxuu leeyahay qaab casaan ah (oo laga heli karo midabbo kale) taas oo ah waxa runtii ka ilaaliya iPhone-keena ka soo dhaca. Maqnaanshaha midabka casaanka ah ee 'iPhone 11 Pro', waa inaan u degno xirashada xirmooyinka casaanka, kiiskan Hannaanku wuxuu u muuqdaa mid aad u qurux badan midabkan. Wuxuu ilaaliyaa geedka oo dhan, oo aan lahayn godad aan ka ahayn kuwa looga baahan yahay makarafoonka, sameecadda iyo isku xiraha Danabka. Dhabarka waxaa lagu dhammaystiray caag aad u adag oo hufan. Dabcan kiisku wuxuu u oggol yahay lacag-bixinta wireless-ka ah iyada oo aan la helin dhibaatada ugu yar.
Kalluumeysiga ayaa u doortay madow badhamada mugga iyo qufulka terminalka, oo sidoo kale leh dusha sare oo xoqan si taabashada ay noo oggolaato inaan si fudud u aqoonsanno. Riixitaanka badhamada ayaa wanaagsan oo taabashada marka la riixayo sidoo kale waa wanaagsan tahay, mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee noocan ah daboolida-sare. Lugaha loogu talagalay leexashada gariirka sidoo kale waa madow. Shaaggan waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee Kalluumeysiga, waana guul tan iyo markii ay aad ugu habboon tahay in la isticmaalo xitaa gacmo gashi.
810G ilaalin militari
Kalluumeystaha kuma qanacsana inuu yiraahdo heerka ilaalinta kiiskiisa, laakiin wuxuu ku dhiirranayaa inuu caddeeyo iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah heerarka ugu baahida badan: Heerka Milatariga 810G. Tani waxay ka dhigan tahay in gacantu ay tahay u adkaysata qoyaanka, boodhka, carada, gariirka ... iyo dhibcaha ilaa 3 mitir. Heerkan ilaalinta waxaan ku dagnaan karnaa kahor dhicitaan kasta xaalad kastoo jirta.
Kiisku sidoo kale wuxuu leeyahay xajin weyn, laakiin sida haddii aysan taasi ku filneyn, suunka curcurka ayaa lagu soo daray, si aad ugu qaadan karto iPhone-kaaga gacantaada haddii aad rabto amniga dheeraadka ah ee suunku ka hortagi doono dhicitaan kasta oo shil ah. Dhabarka kiiska iyo dhalada hore ee iPhone-keena labadaba waxaa ilaalin doona qarka jir taas oo ka fogaanaysa xiriirka tooska ah ee qaybahan oo leh dusha sare oo aan dul saarno. Tani waxay muhiim u tahay galaaska iPhone-ka sababo jira awgood, laakiin sidoo kale dhabarka hufan ee kiiska, si looga fogaado waxyeelo iyo luminta daahfurnaanta. Ka dib laba jiil oo iPhone ah oo ay ilaalinayaan kiiskan Hantiwadaagga, waxaan dhihi karaa in dhabarku uu si fiican u adkeysanayo marinka waqtiga.
Galiye waxay la mid tahay ilaalinta iPhone-keena, iyo dammaanad dhammaystiran. Kiiskeeda Ka Hortagga Saameynta Kalidaaleydu waa mid ka mid ah kuwa sida ugu fiican isugu daraya ilaalinta, nashqadeynta iyo khafiifinta, gaaritaanka shahaado milatari oo in yar ay gaaraan laakiin sidoo kale noo oggolaaneysa inaan soo bandhigno naqshadda xarunteena. Waxaa loo heli karaa dhammaan moodooyinka iPhone iyo midabbo kala duwan, kiiskan loogu talagalay iPhone 11 Pro Max waxaa lagu qiimeeyaa .54,99 XNUMX mid kasta oo ka mid ah midabada la heli karo (madow, casaan, buluug iyo hufan) websaydhka rasmiga ah ee Hannaanleyda (isku xirka)
Kiiska Ilaalinta Saameynta Hannaan
Ilaalinta ugu badan iyadoo la ilaalinayo naqshadeynta iPhone
Qabsashada wanaagsan, badhamada taabashada wanaagsan, wheel for vibrator
Dhabarka Transparent wuxuu si fiican ugu adkeystaa waqtiga
Suunka gacanta ayaa lagu daray
Qaar ka mid ah keydiyaasha shaashadda oo buuxa ayaa ku siin kara dhibaato
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Ilaalinta Saameynta Hantidhowrka, kiiska ugu firfircoon
Maalin kasta - Waa maxay WiFi 6 (802.11AX) iyo sida ay u wanaajiso isku xirnaanta guriga